Main / Office / myanmar zawgyi font windows764 bit
Name: Myanmar zawgyi font windows764 bit
All Time Downloads: 64427
Oct 12, · (Zawgyi Version) မင်္ဂလာပါ Windows အတွက် Zawgyi Keyboard ကတော့ လူတိုင်းမှာ ဒေါင်းပြီးသား ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MEU ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Zawgyi. Dec 10, · Source: ကိုေက်ာ္ျမင္႔ဦး Windows7(bit) အတြင္းတြင္ Alpha Zawgyi Uni-code ကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳေသာအခါ စာ႐ုိက္ မရသည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ႀကဳံေတ. Zawgyi Unicode Installer(Burmese) Windows 7/Vista bit compatible (write/view) Zawgyi Font (viewable only) After downloaded, Double Click on Downloaded Font file, and at the very top, click on “Install Font” button [OR] copy downloaded Font file and .
ၾွၼ်ႉသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈလူဢၢၼ်ႇလႆႈလိၵ်ႈတႆး(ယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈၸေႃႇၵျီႇ) ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ် တီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈ Browser တႃႇတူၺ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉလႄႈ Facebook ၸၵႂႃႇ၊ ၸၼ်ဢဝ. ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ယူနီကုဒ. This is default featured slide 1 title. Go to Blogger edit html and find these findikhikayeleri.info replace these sentences with your own findikhikayeleri.info theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - findikhikayeleri.info